लकडाउनमा घरेलु‍-लैंगिक हिंसा भए कहाँ उजुरी गर्ने? :: Setopati
लकडाउनमा घरेलु‍-लैंगिक हिंसा भए कहाँ उजुरी गर्ने?
जुना श्रेष्ठ काठमाडाैं, चैत १८
बेलायती अखबार 'द गार्डियन' ले तीन दिनअघि एक लेख छाप्योः लकडाउनले विश्वव्यापीरूपमै घरेलु हिंसा बढाउन सक्छ।
उक्त लेखमा लकडाउनबाट धेरै कुरा छुटे पनि घरेलु हिंसामा बाँचिरहेका महिला तथा केटाकेटीले दुर्व्यवहार गर्नेहरू कुनै छुटकारा नपाउने उल्लेख छ। ब्राजिलदेखि जर्मनी, इटालीदेखि चीनसम्मका हिंसाविरूद्धका अभियन्ता र पीडितले लकडाउन तथा क्वारेन्टाइन अवधिमा दुर्व्यवहार बढेको बताएका छन्। र यो हिंसा खतरनाक रूपमा वृद्धि भएको उनीहरूको भनाइ छ।
द गार्डियनका अनुसार चीनको हुबईमा फ्रेबुअरीमा मात्र घरेलु हिंसा साधारण समयमाभन्दा तीन गुणा बढेको प्रहरीले जनाएको छ। गत वर्ष ४७ उजुरी दर्ता थिए भने यो वर्ष १६२ पुगेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
ब्राजिलमा पनि घरेलु हिंसा ४० देखि ५० प्रतिशत बढेको अनुमान त्यहाँका न्यायाधीशले लगाएका छन्। इटालीका अभियन्ताले समेत यस्तै अनुमान लगाएका छन्। अहिले नै २४ घन्टा हेल्पलाइन सेवामा थुप्रै हिंसा सम्बन्धी गुनासो परेको छ। लकडाउन कम भएपछि थप उजुरी आउने उनीहरूको आकलन छ।
स्पेनमा घरेलु हिंसा बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले लकडाउनमा पनि महिलाहरूलाई उजुरी दर्ता गर्न बाहिर निस्किन दिने प्रवन्ध त्यहाँको सरकारले मिलाएको छ। मार्च १९ मा घरेलु हिंसामै एक महिलाको हत्या भएको खबर आएको गार्डियन लेख्छ।
लैंगिक हिंसाविरूद्ध अभियन्ताहरूले लकडाउनमा महिला तथा केटाकेटीमाथि हिंसा बढ्ने जोखिम पूर्वानुमान गरेका थिए।
नेपाल पनि लकडाउन छ। राष्ट्रिय महिला आयोगको तथ्यांकअनुसार गत वर्षका तुलनामा यो वर्ष महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा दुई प्रतिशत बढेको छ। तर नेपालमा विदेशमा जस्तो उच्च वृद्धि नहुने आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्री बताउँछन्।
'लकडाउनमा हामीकहाँ घरेलु हिंसा वृद्धि हुन्छ भन्ने लाग्दैन,' उनले टेलिफोन संवादमा भने, 'हिंसाको मानसिकता राख्ने मान्छेलाई पनि आफ्नै ज्यान कसरी जोगाऊँ भन्ने छ।'
तर घटनाका लागि आफूहरूले तयारी भने गरिरहेको उनी बताउँछन्। आयोगले हिंसा उजुरी दिन आफ्नो पैसा नलाग्ने नम्बर ११४५ को सेवा २४ सै घन्टा खुल्ला राखेको उनको दावी छ। कहीँ कतै लैंगिक हिंसा भएको जानकारी पाएसँगै टोली तोकिएको क्षेत्र पुगेर महिलाको उद्दार गर्ने पनि उनले बताए।
'तर उजुरीभन्दा पनि जिज्ञासा र जानकारीका लागि बढी फोन आउँछ,' सूचना अधिकारी क्षेत्रीले भने, 'कुनै वास्तविक उजुरी परे दर्ता गरेर तुरुन्त कारवाहीका लागि तयार छौं। लकडाउनको यो एक सातामा कुनै त्यस्तो उजुरी परेको छैन।'
यसमा नेपाल प्रजनन् सेवा केन्द्रका कार्यक्रम प्रवन्धक मिङ्गमा लामाको भने भिन्न दृष्टिकोण छ। उनका अनुसार नेपालमा पनि अहिले दुर्व्यवहार बढ्न सक्छ।
उनी भन्छिन्, 'हिंसा गर्ने व्यक्तिको मानसिकता यति बेला झन् बलियो हुन्छ। त्यसैले हिंसामा बाँचिरहेका महिला तथा केटाकेटीका लागि यो समय थप कठिन छ। अनि पहिलेको तुलनामा घटना बाहिर आउन भने गाह्रो छ।'
हिंसा गर्ने मानसिकता लिएर बसेका मान्छे घरै भएपछि उनीहरूको मनोबल उच्च हुने र दुर्व्यवहारमा अघि सर्ने प्रवन्धक मिङ्गमाको भनाइ हो। तर हिंसामा परेकाहरू यति बेला बाहिर कतै निस्कन नसक्ने र कसैको सम्पर्कमा आउन गाह्रो हुने कारण उजुरी गर्न नसकिरहेको उनी बताउँछिन्।
प्रजनन सेवा केन्द्र अन्तर्गतको 'आशा क्राइसिस सेन्टर' ले हिंसामा परेका त्यस्ता महिलालाई सहयोग गर्दैछन्। यसको पैसा नलाग्ने नम्बर ९८०११९३०८८ मा सम्पर्क गरी उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि उजुरी गर्ने ठेगाना, नम्बरसहित सूचनाहरू प्रवाह भइरहेका छन्।
यो सेवा अहिले मात्र उपलब्ध भने होइन। सन् २०१७ देखि नै संस्थाले लैंगिक हिंसामा परेकालाई सहायता पुर्‍याउँदैछ।
'समस्यामा परेकालाई हामी एक प्रोटोकलमा रही सेवा पुर्‍याउँछौ,' प्रवन्धक मिङ्गमाले भनिन्, 'महिला सेल (प्रहरी चौकीमा हुने)को मद्दतमा हामी हिंसा भएको ठाउँमै पुगेर उनीहरूको उद्दार गर्छौं। कुन प्रकारको सेवा चाहिने बुझेर उनीहरूसँग कुरा गर्छौं। स्थिति र सेवा बुझेर परेको खण्डमा सेन्टरमा राख्छौं र यहाँबाट अरू संस्थामा पुर्‍याउने काम गर्छौं।'
लकडाउनमा भने सहजै यसो गर्न नमिल्ने हुनाले महिलाहरूको स्वास्थ्य परीक्षणपछि नै सेन्टरमा ल्याउने उनले बताइन्।
'यो सेवा पहिल्यैदेखि भए पनि अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत थप सक्रिय हुँदैछौं। घरेलु हिंसा हुने सम्भावना निकै छ। बाहिर निस्कन सहज छैन,' उनले भनिन्, 'हिंसामा परेका दिदीबहिनीहरूलाई मेरो कोही छैन भन्ने लाग्न सक्छ। त्यस्तोमा हामी उहाँहरूसँगै छौं भन्ने बुझाउन खोज्दैछौं।'
आशा क्राइसिस केन्द्रले अनलाइन र टेलिफोन मार्फत परामर्श दिने व्यवस्था मिलाएको छ। तर एक सातामा कुनै उजुरी नआएको मिङ्गमा बताउँछिन्, 'सोधपुछका लागि समय–समयमा कल आउँछ। गुनासो भने परेको छैन।'
महिला आयोगले पनि महिलाको सहजीकरणका लागि अत्यावश्यक अवस्थामा अनलाइन तथा फोन सेवा मार्फत् परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँछ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि लकडाउनका कारण हुने सक्ने महिला, केटाकेटी, जेष्ठ नागरिक वा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका जोकोही विरूद्ध हुन सक्ने घरेलु, यौनजन्य वा अन्य हिंसा तत्काल सम्बोधन गर्ने भनेर सूचना निकालेको छ। कुनै पनि सूचना, जानकारी तथा गुनासोका लागि १०० मा कल गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै बालबालिकासम्बन्धी कुनै गुनासो तथा जानकारीका लागि १०४ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
कालिमाटी महिला तथा बालबालिका सेलका इन्स्पेक्टर ज्ञानमञ्जरी शर्माका अनुसार हिंसा सम्बन्धी गुनासो पहिलेभन्दा एक सातामा निकै कम परिरहेको छ। तर लकडाउन सकिएसँगै बढ्न सक्ने सम्भावना छ।
'लकडाउनमा बाहिर निस्कन मिल्दैन भन्ने छ। त्यसैले गुनासोसँगै सेवाग्राही कम छन्,' इन्स्पेक्टर ज्ञानमञ्जरी भन्छिन्, 'लकडाउन सकिएलगत्तै बढ्न सक्छ!'
महिला तथा बालबालिका हिंसाबारे उजुरी यहाँ दिन सकिन्छः
महिला आयोगः ११४५ मा फोन गर्ने
आशा क्राइसिस सेन्टरः ९८०११९३०८८ मा फोन गर्ने
नेपाल प्रहरीः जुनसुकै प्रकारका हिंसा/जानकारीका लागिः १०० मा फोन गर्ने
बालबालिका सम्बन्धी गुनासो जानकारीः १०४ मा फोन गर्ने
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १८, २०७६, ०६:००:००